Kaca xubnaha isu soo baxa bulshada si loo taageero nolosha dadka Madow.
Markaynu nahay Mu'asasada McKnight, waxaan ku qiyaaseynaa Minnesota halkay tahay dhammaan Dadka deegaanka ayaa cod ku leh go'aaminta mustaqbalka aan wadaagno. Iyada oo qayb ka ah yoolkeena si aan u dhisno mustaqbal firfircoon qof walba, waxaan la shaqeyneynaa shuraakadayada si aan u xoojino ka qaybgalka dimoqraadiyadda ee gobolka oo dhan - dhisidda awoodda dadka, ka qaybgelinta bulshooyinka kala duwan, iyo kobcinta dhaqdhaqaaqyada horumarinta caddaaladda iyo sinnaanta.
rubucii kowaad ee deeq-bixineedkii 2022, McKnight waxa uu ku abaalmariyey $1.6 milyan ee yoolkan iyada oo loo marayo Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah ("Bulshooyinka") barnaamijka. Ururada qaataha ayaa ka shaqaynaya sidii ay u dhisi lahaayeen kaabayaasha bulshada ee lagama maarmaanka u ah in la hubiyo in dhammaan reer Minnesota ay cod ku yeeshaan go'aamada saameeya noloshooda. Guud ahaan, McKnight waxa uu bixiyay 39 deeqo oo wadartoodu dhan tahay $36 milyan rubucii (eeg our keydka macluumaadka liiska buuxa ee deeqaha la ansixiyay).
"Laga soo bilaabo xiisadda cimilada ilaa caddaaladda jinsiyadda, nidaamkayaga cuntada, iyo wax ka badan - waxaan u baahanahay dimoqraadiyad shaqaynaysa, xasilloon si aan u keeno isbeddel isbeddel ah oo aan u dhisno berrito wanaagsan," ayuu yiri Tonya Allen, madaxa Mu'asasada. "Si wada jir ah, wada-hawlgalayaashayada deeq-bixiyeyaashu waxay ka shaqeynayaan sidii ay u dhisi lahaayeen raasamaal bulsho iyo siyaasadeed oo ku baahsan gobolka-anaga oo hubinaya in la maqlo midab, dhaqan, dhaqan, dhaqaale iyo jiil kala duwan ee Minnesota."
"Laga soo bilaabo xiisadda cimilada ilaa caddaaladda jinsiyadda, nidaamkayaga cuntada, iyo wax ka badan - waxaan u baahanahay dimoqraadiyad shaqaynaysa, xasilloon si aan u keeno isbeddel isbeddel leh oo aan u dhisno berri wanaagsan.” – Tonya Allen, Madaxweyne
Iyada oo lala kaashanayo barnaamijka Cimilada iyo Tamarta Midwest Midwest, Kooxda Bulshooyinka McKnight ayaa dhawaan dib u hagaajiyay istaraatijiyadeeda ka qaybgalka dimoqraadiyadda, iyaga oo ujeedadoodu tahay in ay dhaafaan maal-gashi shaqsiyeed si loo tixgeliyo wadarta guud ee baahiyaha gobolka iyo bulshooyinkeeda kala duwan. Hadafku waa in la taageero kaabayaasha madaniga ah ee lagama maarmaanka u ah gobolka oo dhan ee loogu talagalay dadka hodanka ah iyo dadka madow, asaliga ah, iyo dadka midabka leh (BIPOC) si ay wax uga sheegaan go'aamada saameeya noloshooda.
"Waxaan aaminsanahay in dadka oo dhan ay leeyihiin cod. Marka ay helaan awoodda iyo fursadaha hoggaaminta, waxay xallin karaan mashaakilaadka adag waxayna beddelaan xaaladaha abuuray caddaalad-darrada, "ayuu yiri David Nicholson, maamulaha barnaamijka Vibrant & Equitable Communities. “Dimuqraadiyadu waa dhaqan wadareed. Inta badan ee reer Minnesota ay si firfircoon uga qayb qaadanayaan—sannad doorasho iyo sanad walba—waxaa sii xoogaysan doona gobolkeena iyo dimoqraadiyadeena.”
Wada-hawlgalayaashayada hoos lagu soo bandhigay waxay siyaabo kala duwan uga qayb qaadanayaan xubnahooda bulshada, tababarida hoggaamiyayaasha cusub iyo dhisidda kaabayaasha bulshada ee adag ee lagama maarmaanka u ah in la sameeyo isbeddel isbeddel leh.
Headwaters Foundation Caddaaladda waa aasaaska bulshada taageera ururada iyo kooxaha ka shaqeeya safka hore ee isbedelka bulshada. Laga soo bilaabo 1984, Headwaters waxa ay maalgalisay abaabulka bulshada deegaanka iyo gobolka oo dhan, iyada oo xoogga saaraysa deeq-bixinteeda kooxaha ay hogaaminayaan iyo u shaqaynta bulshooyinka BIPOC. Sida urur dhexdhexaad ah, Headwaters waxay isticmaali doontaa $1 milyan deeqda McKnight muddo laba sano ah si ay u sii wanaajiso himiladeeda ah dhisidda awoodda asaasiga ah si ay u horumariso sinnaanta iyo caddaaladda iyada oo maalgelinaysa ururo yaryar, oo soo baxaya. McKnight wuxuu rajeynayaa inuu wax ka barto shaqada Headwaters iyo la-hawlgalayaasheeda goobta jooga.
Sanduuqa Waxbarashada Wadajirka ah ee Dhallinyarada Minnesota (MNYCEF) waa ururka ka qaybgalka dhalinyarada ee ugu wayn gobolka. Waxaa maamula oo u shaqeeya da'yarta, MNYCEF waxa ay diiradda saartaa horumarinta jiilka cusub ee hoggaamiyayaasha dhaqdhaqaaqa, ka faa'iidaysiga doorashada iyo abaabulka ku salaysan arrimaha si loo horumariyo sinnaan iyo caddaalad mustaqbal. Deeqa McKnight ee $250,000 in ka badan laba sano waxay ka taageeri doontaa ururka si uu u hawlgeliyo dhalinyarada, u kobciyo ururka, iyo u beddelo sheekada bulshooyinka leh awood baaxad leh oo inta badan la ilduufo.
Xuquuqda sawirka: Tristan Crowell, agaasimaha barnaamijka ee Sanduuqa Waxbarashada Wadajirka ah ee Dhallinyarada Minnesota.
Machadka Siyaasadda Horumarka Deegaanka waa dhaqdhaqaaq qaran oo ay leeyihiin saraakiisha la soo doortay ee maxalliga ah oo horumarinaya caddaaladda midabka iyo dhaqaalaha. Hogaamiyayaashan la soo doortay waxay awood ku dhistaan bulshooyin aan matalaysnayn, waxay wadaagaan fikrado iyo siyaasad geesinimo leh, waxayna bixiyaan agab, tababaro, iyo taageero asaageed si ay dib ugu fikiraan waxa ka suuroobaya bulshadooda. Horumarka Maxalliga ahi waxa uu hiigsanayaa in uu dhisto shabakadeeda Minnesota oo dhan, iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo bulshooyinka ka baxsan aagga metro-ga todobada ah. McKnight wuxuu ku abaalmariyay Horumarka Maxalliga deeq taageero hawleed guud oo ah $200,000 muddo laba sano ah.
Dib usoo celinta diinta Islaamka ee xoojinta (RISE) waxa ay ka shaqaynaysaa in ay wax ka badasho qisada ku saabsan dumarka muslimiinta ah oo ay ka hortimaado nacaybka. RISE waxay ka shaqeysaa inay abaabusho haweenka Muslimka ah ee ka soo kala jeeda isir iyo isir, iyadoo u turjumaysa hoggaankooda gudaha iyo bulshada diintooda si loo kordhiyo ka qaybgalka dimuqraadiyadda iyo nolosha bulshada. Ururku waxa uu sii kordhayaa shaqadiisa gudaha iyo wixii ka dambeeya magaalooyinka mataanaha ah, isaga oo siinaya meelo ay haweenka Muslimiinta ah ku wadaagaan codkooda oo ay ugu doodaan isbedel. Waxa xusid mudan, ururku waxa uu bixinayaa tabobar ku saabsan guddiga doorashada iyo hagayaasha codbixiyayaasha ee aan dhinacna ku xaglinayn waxana uu hormood ka yahay hawlaha ka soo bixida-codbixinta. McKnight waxa uu siiyay Soo noolaynta Walaalnimada $150,000 guud ahaan taageerada hawlgelinta muddo laba sano ah.
Iyadoo mid kasta oo ka mid ah la-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaasha ay taabanayaan degaanno kala duwan, dhammaan waxay ka shaqeynayaan sidii ay u dhisi lahaayeen kaabayaasha lagama maarmaanka u ah nolol bulsho firfircoon iyo dimoqraadiyad caafimaad leh.
Soo dhawaynta Guddida Cusub iyo Xubnaha Shaqaalaha
Saddexdan bilood, waxaanu si diiran ugu soo dhawaynay Karen Coleman guddiga maamulka ee McKnight. Iyadoo in ka badan labaatan sano oo waayo-aragnimo ah qaybta aan faa'iido doonka ahayn, Karen waxay u adeegtaa sidii madaxweyne ku xigeenka fulinta ee Mu'asasada Bulshada ee Jackson Hole ee Wyoming.
Sidoo kale waanu soo dhawaynay Chad Schwitters, Marcq Sung, iyo Katie Wehr Kooxda Vibrant & Equitable Communities sida saraakiisha sare ee barnaamijka. Bishii Maarso, Jamaal Abuukar ku biiray kooxda Maaliyadda oo ah xisaabiye sare.
Waxaan sidoo kale u dabaaldegeynaa Therese Casey, ka dib 34 sano oo ay ku jirtay Foundation, waxay ka tagi doontaa booskeeda agaasimaha maaliyadda. Therese waa xubinta ugu wakhtiga dheerayd kooxda McKnight, waxaanan si daacad ah ugu mahad naqaynaa sanadaha adeega ay bixisay. Ha moogaan wadahadalka aan la yeelanay Therese halkaas oo ay la wadaagtay waxa iska beddelay McKnight tobaneeyo sano.
Intaa waxaa dheer, waxaan u dabaaldegnay laba xubnood oo kooxda ah oo ku soo koray xirfadahooda McKnight. Molly Miles, oo la shaqaynaysay Mu'asasada muddo afar sano ah, ayaa loo dalacsiiyay sarkaalka isgaarsiinta. Flannery Clark, oo la joogay McKnight ilaa 2015, ayaa loo dalacsiiyay maareeyaha maamulka.